ဝိဇ္ဖာကာတွန်းများ | Weenyinthit Bookshelf
ကာတွန်းဝိဇ္ဖာရဲ့ စာအုပ်လေးနှစ်အုပ်ထပ်ရလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကာတွန်းဝိဇ္ဖာရဲ့ စာအုပ်လေးတွေကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုစာအုပ်လေးတွေထဲက တော်တော်များများကို PDF အနေနဲ့တိုက်ရိုက်တင်ပေးထားပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ် အဆင်မပြေသူများ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။
၀ိဇ္ဖာ -ခေတ်ပြိုင်မှတ်စုများ (ရွှေအဆင်း)
၀ိဇ္ဖာ – မေတ္တာဖြန်းမှလန်းဆန်းမယ်သာယုံ(ဗီတာမင်စာစုများ)
၀ိဇ္ဖာ -မျှတသောမိုးရေ (ဗီတာမင်စာစုများ)
၀ိဖ္ဖာ -လူနှင့်မျက်နှာ (ရွှေအဆင်း)
၀ိဇ္ဖာ – ကြိုးတစ်ချောင်းကို ဖြတ်ကျော်ခြင်း ၀ိဇ္ဖာ- ဟိုတုန်းကလိုလူစား (ရွှေအဆင်း)
၀ိဇ္ဖာ – တစ်ရွှာလုံးနဲ့တစ်ယောက် (ရွှေအဆင်း)
၀ိဇ္ဖာ – ပန်းတစ်ပွင့်၏ရံနံခက်ဆစ် (flash)
၀ိဇ္ဖာ- အပြောရောင်ရင်ခွင်အောက်က ကိုယ်ရောင်ဖျောက်တဲ့ချစ်သူ (flash)
၀ိဇ္ဖာ – အချစ်သည်ပုံပြင်မဟုတ်ပါ သို့သော်ပုံပြင်တွေထဲမှာအချစ်ရှိသညိ (no download)
၀ိဇ္ဖာ – ရွှေပြည်သာမှာ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် (new) ၀ိဇ္ဖာ- ကြိုးပျက်နေသောပတ္တလားသည်ပို၍ချို၏ (new) စာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြီး စိတ်အမောဖြေနိုင်ကြပါစေ။
37 Responses to “၀ိဇ္ဖာ ကာတွန်းများ”
htun tun says:	October 28, 2009 at 6:37 am	ဗဟုသုတတွေအများကြီးရပါတယ်
Reply	htetaung says:	November 5, 2009 at 9:46 am	ကာတွန်းဝိဇ္ဖာ ကိုအရမ်းလေးစားပါတယ်။ သူရဲ့ ကာတွန်းတွေကိုလဲ အသစ်ထွက်သမျှ အားပေးပါတယ်။ သူနဲ့ မိတ်ဆက်လို့ ရရင် မိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။
Reply	khinmgkyaw says:	November 22, 2009 at 3:58 am	အကြိုက်ဆုံးကယတွန်းဆရာတွေထဲမှာထိပ်ဆုံးက ၀ိဇ္ဖာပါ။
Reply	I hate Wait Zar says:	November 24, 2009 at 9:29 pm	Why people are reading Wait Zar, I don’t get it. I think their cartoons are full of adult contents, totally inappropriate and rude. The graphics are ugly and not becoming.
Why don’t you all like That Paing Yae or Nay Paing cartoons, I mean seriously they have the most beautiful graphics and interesting story line of all time.
Come on people please post their cartoons. OH IF YOU WANT TO SEE WAIT ZAR HERE IS THE ADDRESS.
92 st, number 112, 7th floor
Reply	I hate wait zar????? says:	February 14, 2010 at 5:59 am	If u hate Wait Zar , then don’t read his book!! Don’t mess up around here!!
That Paing Yae books are great!! i agree with ya..
But they have their own styles .. you don’t need to compare them ‘n don’t need to look down Wait Zar..
Reply	I hate wait zar????? says:	February 13, 2010 at 2:30 pm	If u hate Wait Zar , then don’t read his book!! Don’t mess up around here!!
Reply	Arkar Ne Win says:	September 8, 2010 at 4:59 am	Thanksalot.
Reply	Arkar Ne Win says:	September 8, 2010 at 5:04 am	တကယ်လိုချင်တဲ့ စာအုပ်မရပေမယ့် ရတဲ့စာအုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဖြစ်နိုင်ရင် ၁၉၉၇လောက်ကထွက်ခဲ့တယ့် ကျွန်တော်တို့အားလုံးတာဝန်ရှိသည်ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို လိုချင်ပါတယ်။
Reply	kyawhtoonzaw says:	October 20, 2010 at 1:24 am	စာအုပ်တွေဖတ်ရတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခု တင်ထားတဲ့ ၀ိဇာရဲ့စာအုပ်(၂)အုပ်က ဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကူညီပါအုန်း
Reply	ko Pauk says:	December 24, 2010 at 2:21 am	တင်ထားတဲ့ ၀ိဇာရဲ့စာအုပ်(၂)အုပ်က ဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကူညီပါအုန်း။ ကာတွန်းဝိဇ္ဖာ ကို အားပေးပါတယ်။ ဗဟုသုတတွေအများကြီးရပါတယ်။ ကာတွန်းဝိဇ္ဖာရဲ့ အခုစာအုပ်လေးတွေထဲက တော်တော်များများကို အားပေးပါတယ်။
Reply	naingyarzartun says:	June 12, 2011 at 12:03 pm	အရမ်းကိုကျေးဇူးတင် ပါတယ် စကားဝါမြေရယ်
Reply	အေးမြသော်တာ says:	October 22, 2011 at 5:01 am	၀ိဇ္ဖာ ကာတွန်းတွေ ဖတ်ရတာ ပျော်တယ် … ဇတ်ဆောင်တွေကို ချစ်တယ်..ကျေးဇူးပါ
Reply	khantminthu says:	October 31, 2011 at 5:26 am	ဒီကာတွန်းလေးတွေ က ဖတ်ရတာ
နောက်ပြီး ခြူသစ်တို့ ကာတွန်းလေးတွေလဲ တင်ပေးပါဦး
Reply	kyipyarlin says:	October 31, 2011 at 5:37 am	ကာတွန်းဆွဲတဲ့ ဆရာက တော်တော်စိတ်ကူးကောင်းတဲ့သူပဲနော်
သူဆွဲတဲ့ ကာတွန်းလေးတွေက ဘ၀သရုပ်ဖော်လေးတွေပဲ
ကာတွန်းဆရာနဲ့ လဲ မိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်
Reply	ဦး ညီ says:	November 1, 2011 at 7:01 pm	ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဗျာ……. စာအုပ်တွေ ဒေါင်းသွားပါတယ်။
Reply	Tsawm says:	December 13, 2011 at 5:27 am	Thank you very much.. I’d download all ..
Reply	Kyal Sin Thit says:	January 11, 2012 at 2:18 am	ဆရာသမားကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သုတ၊ ရသ မျိုးစုံသော စာတွေဖတ်ရလို့လည်း ကျေနပ်မိပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဆရာမင်းခိုက်စိုးစန်ရဲ့ စာများကို ထပ်ပြီးတော့ တောင်းဆိုပါရစေ။
Reply	ဇူးဇူး says:	January 15, 2012 at 3:47 am	ကျေးဇူးပါ ဒီမှာလိုချင်တဲ့စာအုပ်တော်တော်များများရပါတယ်
Reply	snow says:	January 22, 2012 at 10:26 pm	ကာတွန်း ၀ိဇ္ဖာ ကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းတယ် အသစ်ထွက်တိုင်းတင်ပေးပါ။ အမြဲတမ်းအားပေးပါတယ်။
Reply	kyaw zin latt says:	February 16, 2012 at 10:34 pm	ဒီကာတွန်းကို၂၀၀၇ခုနှစ်ကတည်းကအားပေးခဲ့တာပါ
Reply	မိုးကိုထွန်း says:	April 1, 2012 at 12:47 am	ကာတွန်း ၀ိဇ္ဖာ ကိုအား ကျတယ်………..
ကျနော်က acidrain.mdy@gmail.com ပါ
30.3.2012 မှ ဒီ website လေးကိုတွေ့ တာပါ
ကျနော်လဲ စာရေးတာ ၀ါသနာပါလို စာဖတ်ရတာလဲဝါသနာပါတယ်
Reply	ကိုခန့် says:	May 4, 2012 at 3:46 am	ကျန်တဲ့စာအုပ်အသစ်လေးတွေတင်ပေးပါဦးနော်
Reply	ထက်ပိုင်စိုး says:	May 4, 2012 at 10:23 pm	တွတ်ပီစာအုပ်တွေဖတ်လို့ရအောင်ကူညီပေးပါ
Reply	sinmonlukalay says:	June 2, 2012 at 5:12 am	ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Reply	မင်းမောင်မောင် says:	June 11, 2012 at 4:48 pm	၀ိဇ္ဖာ ရဲ့ “ရာဇ၀င်ထဲမှာမောင့်ကို ထားရစ်ခဲ့”တင်ပေးပါလားခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့(၁၀)နှစ်ကျော်ကပါ။
ကျွန်တော် ကလေးဘ၀ကဖက်ခဲ့ဖူပါတယ်။ပြန်လိုချင် လို့ပါ။
Reply	နိုင်နိုင် says:	July 19, 2012 at 1:37 pm	9 10 တန်းတုန်းကကျွန်တောထွက်သမျှစာအုပ်နည်းပါးကိုဖတ်ခဲ့ပါတယ် ရီလည်းရီရတယ် ခံစားချက်တွေလည်းပါတယ် လက်တွေ့ ဘဝ ကိုလည်းပေါ်လွန်အောင်ရေးသားနိုင်လို့ ပြောမပြ
တက်အောင်ကျေနပ်မိခဲ့ပါတယ် ရန်ကုန်ရောက်တော့ဝိဇ္ဖာကိုရှာဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အခွင့်မသာ
ခဲ့ပါဘူး တန်ဖိုးထားတဲ့စာရေးဆရာတစ်ယောက်မို့ ဓါတ်ပုံနဲ့ စာရေးရတဲ့အကြောင်းအရင်းလေး
တွေ ကိုသိချင်ပါတယ် ကြိုးစားနေသ၍ဆရာထာဝရအောင်မြင်မှာပါ သင်ဆရာမဟုတ်ပေမဲ့ မြင်ဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ထာဝရရိုသေလျက်ပါ နိုင်နိုင်
Reply	Tara says:	August 18, 2012 at 5:26 am	This isacomment to the admin. I came to your “á€á€­á€‡á¹á€¬á€€á€¬á€á€¼á€”á€¹á€¸á€™á€ºá€¬á€¸ | Weenyinthit Bookshelf” page via Google but it was difficult to find as you were not on the first page of search results. I see you could have more traffic because there are not many comments on your site yet. I have foundawebsite which offers to dramatically increase your rankings and traffic to your site: http://aerotraffic.com/web-traffic/. I managed to get close to 1000 visitors/day using their services, you could also get lot more targeted traffic than you have now. I used their services and got significantly more visitors to my website. Hope this helps Take care.
Reply	May Thu says:	September 3, 2012 at 1:22 am	အရမ်းကောင်းတယ်။ ကာတွန်း ၀ိဇ္ဇာရဲ့ ကာတွန်းတွေက အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ ဇာတ်ကောင် မိန်းကလေးတွေကလည်း ချစ်စရာကောင်းတယ်လေ။ကာတွန်း ၀ိဇ္ဇာကို အမြဲ အားပေးနေမှာပါရှင်။
Reply	aungkyawmin says:	September 13, 2012 at 1:57 am	ဒေါင်းသွားတယ်… so thanks
Reply	pyaythein says:	September 22, 2012 at 3:34 am	i like weit zar very much.it can give me pleasure and happy.
Reply	Yee Yee Soe says:	November 9, 2012 at 5:58 am	ဘ၀​အမော​တှေ​လညျး​ပွေ​ပါ​တယျ၊ ဗ​ဟု​သုတ​လညျး​ရ​ပါ​တယျ၊ PDF နဲ့​တငျ​ပေး​ထား​လို့ download လုပျ​ရ တာ​လဲ​အဆငျ​ပွေ​ပါ​တယျ။ နောကျထပျ​အသဈ​လေး​တှေ​လညျး ထပျ​ပွီး​တငျ​ပေး​စေ​ခငျြ ပါ​တယျ။ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျ​ပါ​တယျ။
Reply	rockstar says:	November 12, 2012 at 9:30 am	ကာတွန်းမှာတော့ဝိဇ္ဇာကိုအကြိုက်ဆုံးပါထွက်သမျှအကုန်ဖတ်ပြီးပါပြီအားပေးလျှက်ပါနော်……
Reply	zin says:	January 1, 2013 at 7:00 am	၀ိဇ္ဇာကာတွန်းကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်။အသစ်ထွက်တိုင်းတင်ပေးပါ။
Reply	နေဇော် says:	February 11, 2013 at 2:02 am	ကျေးဇူးပါ
Reply	nyeinchan.masein says:	March 6, 2013 at 10:46 am	အားပေးပါတယ်ဗျာ။
Reply	ကောင်လေး says:	April 16, 2013 at 11:49 am	“ချစ်သူပြောတဲ့တနင်္ဂနွေပုံပြင်” မှာ မျက်ရည်ကျရပြီးကတည်းကကြိုက်သွားတာ…. “ကျနော်တို့မှာလည်းတာဝန်ရှိပါသည်”ကိုအကြိုက်ဆုံးပါ…….
Reply	စိုင်း says:	May 17, 2013 at 10:26 am	ကာတွန်း ၀ိဇ္ဇာကို ငယ်ငယ်တည်းက အရမ်းဖတ်ဖြစ်ပါတယ်..